China Glass tavoahangy tavoahangy tavoahangy famenon-tsolika sy mpamatsy | Higee
Ny tsipika milina famenoana toaka dia mampifangaro ny fanasan-tavoahangy, ny famenoana ary ny fametahana ny masinina amin'ny masinina monoblock iray. Ny fizotrany dia tanterahina ho azy tanteraka.
Mifaninana amina tavoahangy feno tavoahangy feno famokarana milina Monoblock Production Line
1.Srew feeder amin'ny tavoahangy fitaratra
2.Ny tavoahangy feno tavoahangy fanasan-damba sy milina fanidiana
milina famenoana whisky dia mampiditra ny fanasana tavoahangy, famenoana whisky ary fametahana anaty monobloc iray, ary ny fizotrany telo dia tanterahina ho azy tanteraka. Izy io dia ampiasaina amin'ny famenoana rano mineraly, rano madio, ary zava-pisotro tsy misy gazy hafa (toy ny whisky). Ho an'ny singa elektrika dia mampiasa Mitsubishi, Omron, Schneider, Airtac, sns isika izay marika malaza sy manana kalitao azo antoka. Ny singa masinina tsirairay izay mifandray amin'ilay ranoka dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Ireo singa manan-danja dia vita amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny milina voafehy isa, ary ny toetoetran'ny masinina manontolo dia voamariky ny sensor photoelectric, tsy misy tavoahangy tsy mameno, tsy misy tavoahangy tsy misakana. Izy io dia misy tombony amin'ny automatisation avo lenta, fandidiana mora, fanoherana mahery vaika, fitoniana avo lenta, tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany, sns. Ny kalitao dia mahatratra ny ambaratonga avo lenta eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Safidy tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa vola amin'ny famokarana zava-pisotro vaovao sy taloha.
● Miaraka amin'ny firafitry ny fifindran'ny vozona tavoahangy tavoahangy, maharitra ny fampitana tavoahangy; tena mety sy haingam-pandeha hampiasa tavoahangy samihafa amin'ny famenoana masinina iray ihany amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haavon'ny conveyor sy ny faritra ifanakalozana.
● Miaraka amin'ny teoria famenoana Gravity, haingana ny famenoana haingana ary avo lenta ny famaritana; ny haavon'ny famenoana dia azo ovaina.
Teo aloha: Masinina mameno labiera tavoahangy fitaratra
Manaraka: Rafitra fitsaboana rano